Shiinaha sanduuqa Caruurta loogu talagalay carruurta shandada warqada kartoonada leh oo gacanta ku leh soo saaraha iyo alaab-qeybiye | Huaguang
Sanduuqa carruurta lagu ciyaaro ee loogu talagalay carruurta boorsada warqadda kartoonada leh ee gacanta lagu hayo
Shandad Warqad Leh Oo Lagu Shaqeeyo
Cabir: 25 * 18 * 8.5cm
Est. Waqti (maalmo) 7 15 In lagu gorgortamo
Shandadan waraaqda ah ayaa inta badan loo isticmaalaa in lagu duubo hadiyadaha carruurta ama loo abaabulo agabyada yaryar ee carruurtu ku ciyaaraan. Codkeeda ugu weyn waa buluug iyo caddaan, naqshada qaabka dhibcaha mawjadaha, waxay u egtahay nadiif, raaxo iyo qurux badan, aad ugu habboon carruurta. Iyo isku midabeynta midabka noocaas ah, kama caawin karo laakiin waxaan rabaa inaan ka gudbiyo shandadan warqada shandada, sababaha aan soo sheegnay ee saameynaya midab bedelka sheyga la daabacay.
Daabac habka daabacaadda iyo keydinta, midabkiisa, fudeydkiisa, dhererkiisu inta badan wuu is beddelaa, haddii ay tahay khad isku mid ah, ama in ka badan laba nooc oo khad midab ah, ficil ahaan iyo dibed ahaanba, midabku wuu mugdi karaa, wuxuuna noqon karaa iftiin. Heerka daabacaadda ee tayada aadka u wanaagsan waa: Dufcaddii wax soo saarka ka hor iyo ka dib midabka iftiinka mugdiga ah si ay u noqdaan kuwo isdaba-joog ah, midab leh, isla mar ahaantaana la jaan qaadaya tusaalaha wajiga midabka madow iyo iftiinka qoto dheer ee khadka.
Khadku waa iftiin - adkaysi u leh midabka iyo midabbaba
Khadka qorraxda, midabkiisa iyo dhalaalkiisu waxay ku kala duwanaan doonaan heerar kala duwan oo isbeddel ah, iska caabin buuxda oo iftiin leh oo ha beddelayn midabka khadku maaha, iftiinka qorraxda oo xoog leh, dhammaan midabka khadku wuxuu soo saari doonaa heerar kala duwan oo isbeddel ah. Waxaa jira laba nooc oo isbeddel ah.
Fade: hoosta ficilka shucaaca qorraxda, shucaaca iftiinka khadku wuu liitaa, wuxuu lumiyay midabkii asalka ahaa ee dhalaalayay, midabku wuxuu noqday cirro cirro leh. Gaar ahaan khad midab khafiif ah iyo daabac afar-midab ah oo daabacan marka jaallaha iyo guduudka labada midab ay dhakhso u libdhi doonaan, iyo cyan iyo khadku way ka gaabinayaan.
Midab beddelid: ka soo horjeedka daabacaadda midabka midabka madow, midabka isbeddelka ficilka iftiinka qorraxda waa mugdi, midabka sidoo kale wuu is beddelay, dadku waxay ugu yeeraan isbeddelkan midab beddelidda.
Saxanka daabacaada Offsctdruckmasenten looma kala sooci karo qoynta saxanka qaybta banaan, offsctdruckmasenten waa biyaha ugu horeeya ee khadadka kujira, biyuhu si lama huraan ah waxay umuuqanayaan ifafaale emulsifying ah. Midabka emulsion Ink wuxuu noqon doonaa mid khafiifa, laakiin, marka uumiga biyuhu dib u soo celin karo midabkii asalka ahaa, sidaa darteed biyaha oo sii weynaanaya, inta uu le'eg yahay emulsion-ka, ayaa sababi doona midab xumo. Gaar ahaan, heerka emulsification ee midab khad gebi ahaanba ka wada duwan, ifafaale ka midab noqoshada ayaa si gaar ah caan u ah.
Waxyaabaha ku qoran waraaqaha ee warqadda macaan ee dusha sare
Macmacaanka dusha sare ee warqadda iyo nuqulka daabacaadda ayaa leh xiriir dhow, uma baahna warqad siman inta badan waxay ubaahantahay cadaadis saaid ah, si khadku u yeesho waxayna leedahay xiriir wanaagsan. Sida daabacaada isku-darka khadadka, liisanka, joogteynta xadiga dhumucda filimka khadadka, cadaadiska sii kordhaya wuxuu had iyo jeer ka dhigaa aaladda faafitaanka molecularly imprinted, isla mar ahaantaana, waraaqaha ayaa lagu dhajiyaa meesha, laakiin wali xiriir xun, sida: warqad dahaaran iyo joornaal cusub isla saxanka daabacan ee saameynta daabacaadda ayaa leh farqi weyn, wuxuu si cad uga duwanaan karaa saameynta daabacaadda ee kaladuwan.
Warqad, sidoo kale cabirka nuugista iyo saameynta taranka wuxuu leeyahay xiriir toos ah, badiyaa tayada daabacaadda maaddada waa xaashiyo dabacsan oo warqad ah, haddii isku dheelitirnaan la'aanta khadadka, dareeraha hooseeya, warqaddu waxay nuugi doontaa isku xirnaanta lakabka khad badan, haddii dhogorta stoma dhexroor ka weyn dhexroorka walxaha midabka, ka dibna, xitaa midabbada ayaa la neefsadaa, dhereggii wax qorista ayaa hoos u dhacaya. Waxaad ubaahantahay inaad sifiican u kordhiso dhumucda lakabka lakabka Si kastaba ha noqotee, si loo kordhiyo dhumucda lakabka khadaka, xilligan xaadhisu waxay sababi doontaa "faafitaan", waxay saameyn ku yeelan doontaa saameynta nuqulka daabacaadda. Maqnaanshaha warqadda yar, waxay ka dhigi kartaa inta badan filimka khadku inuu ka muuqdo dusha sare ee warqadda, sidaa darteed lakabka khadadka la daabacay wuxuu leeyahay dherer wanaagsan.
Waraaqda warqadda gudbintu way weyn tahay, waxay ka dhigi doontaa dhumucda lakabka khadadka khafiifka ah, daloolada dusha sare ee waraaqaha waa weyn yihiin, laakiin sidoo kale qayb ka mid ah walxaha midabbada ayaa lagu dhex tuuray warqadda isla waqtigaas, markaa waxaa jira dareen midab ah. Ujeeddadan, adeegsiga dusha sare ee qallafsan, waraaqda dabacsan, iyo dheecaanka khadka iyo warqad weyn, si loogu fiirsado midabka.
Midabku uma adkeysana kuleylka
Khadka geedi socodka qalajinta, khafiifka fudud - qalajinta khad daabacaadda caag ah ayaa badiyaa isku xiran - qallajinta qiiqa. Kordhinta qalajinta khadadka daabacaadda kahor intaanay jirin waji go'an, polymerization qiijinta qandhada ayaa ah falcelin diimeed, qalajinta dhaqso badan ayaa bixin doonta kuleyl badan, haddii kuleylka si tartiib ah loo sii daayo, ma sameyn doono midabka midabka midabka midabka. Tusaale ahaan: khad midab dahabi ah wuu madoobaa oo lumiyaa dhalaalkiisii ​​asalka ahaa.
Waqtiga la daabacayo, xaashiyaha daabacaadu waxay ku uruursan yihiin xirmooyin, maxaa yeelay si aad u badan ayaa loo xareeyay, qaybta dhexe ee daabacaadda qalliinka qallalan ee polymerization ficil-celinta diiran, kuleylka ma fududa in la diro, heerkul aad u sarreeya oo ku jira qaybta dhexe ee midab-badnaanta badan .
Saliida qallalan waxay leedahay saameyn fudud
Khadka midabka waxaa iska leh midab qabow, jaalle khafiif ah, cagaar sumurud ah, buluug hawo ah iyo midab kale oo midab ah, ha isticmaalin saliidda qalajinta cas, maxaa yeelay saliidda qalalan ee cas lafteeda leh midab buluug ah oo qoto dheer, waxay saameyn ku yeelan doontaa midabka khadadka iftiinka
Saliida qallalan ee cad waxay umuuqataa mid cad, laakiin isku-xirnaanta ayaa ah bunni cirro leh kadib oksaydh. Haddii xaddiga saliidda qallalan ee cad ay aad u badan tahay, daabacaddu waxay noqon doontaa midab huruud-bunni ah markii la qallajiyo, halka midabka khadadka madow sida cagaarka, madow iyo guduudka leh saliidda qalalan ee cas si weyn u saameyn doonin.
Dhadku maaha alkali - adkaysi u leh
Daabacaadda warqadda daabacaadda PH = 7, warqad dhexdhexaad ah ayaa ah tan ugu habboon, midabbada guud ee aan dabiici ahayn ee ay soo saarto aashitada khadku, alkaliinku waa liidataa, astaamaha maaddooyinka aashitada, aalladda ayaa ka sii wanaagsan, gaar ahaan buluugga dhexdhexaadka ah, khad buluug madow ayaa ku libdhi doona alkali. Midab khafiif ah oo dhexdhexaad ah oo midabkeedu yahay Alkali midabkeedu yahay casaan, birta shaandhaynta aluminium elektarooniga ah, Hindiya waxay noqon doontaa dahabkii hore ee huruudka ahaa ee walxaha alkaline ka, ma jiraan wax dhalaalaya, warqad alkaline daciif ah oo dheeri ah, oo inta badan lala kulmo daabacaadda isku xidhka wax soo saarka dambe ee ku xidhan dhejiska alkaline, haddii ay xirxirayaan daabacaadda qurxinta wax soo saarka waa walax alkali sida saabuun, saabuun, budada wax lagu dhaqo iyo wixii la mid ah, dhammaantood waxay doonayaan inay tixgeliyaan caabbinta alkali, iska caabbinta saponification ee waxqabadka khadku.
Saamaynta deegaanka keydinta
Badeecadaha ugu badan ee daabacaadda ee keydinta muddo dheer, waxay si hubaal ah u muujin doonaan ifafaalaha huruudda, sababaha dhowr dhinac ee soo socda.
Fiber warqad ayaa ka kooban lignin iyo midab doorsooma. Wargeysyada lagu daabaco joornaalka cusub waxay u badan tahay inay huruud noqdaan oo jabaan.
Daabacaadda daabacaadda daabacaadda daabacaadda midab-afar-midab ah oo midabkeedu badan yahay, inta badan qorraxda, cimilada, dabaysha iyo roobka, nabaad-guurka heerkulka sare ee dibadda, iyo wixii la mid ah, maxaa yeelay midabku ma aha mid u adkaysta nalka, kuleylka u adkaysta, iyo midabka ama libdhka.
Waxyaabaha isbeddelka midabka ee arrimaha la daabacay way kala duwan yihiin mana jiraan wax soo saar oo wax walba qaban kara. Sida shandadan waraaqda ah, midabkeedu wuu isbeddeli karaa waqti ka dib. Laakiin ugu yaraan way qurux badan tahay markaan isticmaalno.
Waara oo fudud in la qaado.
Ka ilaali in si fudud loo furo inta aad wax sido
Waxay leedahay awood balaaran waxayna hanan kartaa waxyaabo badan.
Hore: Kartoo sanduuqa hadiyad qaab wareega la tayo sare leh sanduuqa dhigay
Xiga: Calaamadda Custom Handmade Paper Jewelry Box Qabanqaabiyaha oo leh Muraayadda Muraayadda Muraayadda Dhagaha Qurxinta
Khaanadaha Kaydinta kartoonka
Sanduuqa Dahabka ee Shaqsiga ah
Sanduuqyada Hadiyadaha Yaryar
Sanduuqa Hadiyadda Khamriga
Toy sanduuqa caruurta ee boorsada warqad kartoon w ...